Blog Reader: [CHITSANM'S LUXURY MUSIC] 25 New Entries:
မေ Artist : မင်းမော်ကွန်း
မေ.. မေဟာသိပ်လှလို့နေ.....ကိုယ်ဟာရူးရလိမ့်မယ်.. တစ်သက်လုံးချစ်ချင်တယ်... မေ..မေဟာပန်းလေးအတိုင်းပဲ..ညင်သာနူးညံ့လွန်းတယ်.. ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရချင်တယ်.. ဘယ်လိုတို့မျော်လင့်ထားတာတွေ...မေဖျက်ဆီးလိုက်သလဲ…. မြတ်နိုးခွင့်လေးတာ့ပေးသင့်ပါတယ်ကွယ်.. မေ..မေဟာရက်စက်တတ်လည်း.. ရင်ကိုခွဲသွားလိုက်ကွယ်.. နာကျင်လည်းချစ်နေမယ်.. မေ..မေဟာပန်းလေးအတိုင်းပဲ..ညင်သာနူးညံ့လွန်းတယ်.. ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရချင်တယ်.. ဘယ်လိုတို့မျော်လင့်ထားတာတွေ...မေဖျက်ဆီးလိုက်သလဲ... မြတ်နိုးခွင့်လေးတာ့ပေးသင့်ပါတယ်ကွယ်.. ဘယ်လိုတို့မျော်လင့်ထားသမျှတွေ...မေဖျက်ဆီးလိုက်သလဲ... မြတ်နိုးခွင့်လေးတာ့ပေးသင့်ပါတယ်ကွယ်..
ရင်ခုန်ဘက်သို့တမ်းခြင်း Artist : ဟန်ထွန်း
ပြန်ဆုံချင်ရင် ရင်ခုန်သံကိုမညာနဲ့လေ.. မညာနဲ့လေ.. သေချာစဉ်းစား ဒီတစ်ခါ ရင်ခုန်သံကိုညာခဲ့ရင်.. ငါနဲ့မင်း တကယ်ကိုအဝေးဆုံး… ဟိုး… ဟိုးတစ်ချိန်က မင်းပြောဖူးတဲ့ချစ်တဲ့စကားတွေ… ငါမှတ်မိလို့နေသေး… လွယ်လွယ်မေ့ပြစ်လို့မဖြစ်ဘူး… ငါနဲ့မင်းက ဘ၀တူ ရင်ခုန်ဘက်လူ… တကယ်အပြီးသတ်မဝေးသေးခင် ပြန်စဉ်းစား… ရည်ရွယ်တဲ့ ဘ၀ရဲ့ခရီးထဲဆက်ချင်လို့… အချိန်မလွန်ခင်နင်ပြန်ခဲ့လေ… ကိုယ်မျှော်လင့်နေ… အတူဆုံမဲ့နေ့ ကျန်တာတွေအတွက်နဲ့လေ… ငါနဲ့မင်း ရင်ခုန်သံမညာကြေးနော်… ဟိုး… ဟိုးတစ်ချိန်က မင်းပြောဖူးတဲ့ချစ်တဲ့စကားတွေ… ငါမှတ်မိလို့နေသေး… ဟို… အရင်က မင်းပြောဖူးတဲ့ သိပ်ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေ… အကုန်ကျန်ရစ်နေနေဆဲ… လွယ်လွယ်မေ့ပြစ်လို့မဖြစ်ဘူး ငါနဲ့မင်းက ဘ၀တူ ရင်ခုန်ဘက်လူ… တကယ်အပြီးသတ်မဝေးသေးခင် ပြန်စဉ်းစား… ရှေ့ဆက်မဲ့ဘ၀ရဲ့ခရီး… ရင်ခုန်ချင်လို့… လွယ်လွယ်မေ့ပြစ်မနေနိုင်သေးဘူး… ငါနဲ့မင်းက ဘ၀တူ ရင်ခုန်ဘက်လူ မင်းနဲ့ဒို့နဲ့အချစ်တွေမေ့ပြီလား…
သူလေး Artist : ရိန်မိုး
သူလေး… ခဏလောက်တော့ ရှင်းပြခွင့်ပေးပါဦး… ချစ်တတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေ ထိမ်းချုပ်လို့မရတော့ဘူး ဒါကို နားလည်ပေးပါ… သူလေး… အစကတည်းကမထိုက်မှန်းတော့သိပါတယ်… မင်းနဲ့ကြကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေ ထိမ်းချုပ်လို့မရတော့ဘူး… ဒါကို သူလေး… သိရဲ့လား… CHO 1 : မေ့ပျောက်တတ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တွေ မင်းနဲ့ကြစွဲလန်းခဲ့ပြီ… အိပ်လို့မရတဲ့ညပေါင်းများစွာ ကိုယ်ရင်ဆိုင်ကာကျော်လွှား… ကြမ်းတမ်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေ မင်းနဲ့ကြစိုးရွံ့အားငယ်… ဒါကို သူလေး… သိရဲ့လား CHO2: ဇွတ်မိုက်တတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တွေ မင်းနဲ့ကြပြောင်းလဲသွားပြီ… ရင်တွင်းခံစားချက်တွေဖွင့်မပြောရရင်… မနေနိုင်တော့ဘူး… အားလုံးက ၀ိုင်းပြောကြပြီ… ကိုယ့်ဘ၀တော့ဒုက္ခရောက်ပြီ… ဒါကို သူလေး… သိရဲ့လား…
ဒီဇင်ဘာည Artist : လင်းနစ်
အပြင်မှာနှင်းတွေ ကျဆင်းလို့နေသည် အိပ်မက်ဟောင်းငယ် ရင်ထဲရောက်လာသည် ငါမလိုချင်သော နာရီများ လွန်ဆန်ချင်နေလည်း မျှော်လင့်ခြင်းတွေ ငါမုန်းလိုက်ချင်ပြီ ဒီလိုညတွေ ကုန်ဆုံးလိုက်ချင်သည် မြူမှုန်တွေရဲ့ ခြေသံလေး နင်ပြန်မလာတော့ဘူးလား CHO : ( ဒီဇင်ဘာည အဖြူရောင်မြူနှင်းကြားမှာ အတူဆုံးနေကျ ဒီလိုအချိန်လေးရောက်လာ ဟို.. အရင်က အပြာရောင်အိပ်မက်လေးကို ပြန်လည်တမ်းတရင်း ကြေကွဲ ငါငိုနေဆဲ ယုံပါကောင်မလေးရေ ပြန်ဆုံနိုင်မယ့် ကံကို ငါတမ်းတတယ် ဒါပေမယ့်လည်း အဖြူရောင်မြူနှင်းကြားမှာ ငါဟာအချစ်ပျောက်လိုက်ရှာရင်းနဲ့ လွမ်းနေဆဲ…) ပူလောင်ခြင်းတွေ ရင်ထဲပြည့်နေပြီ ဒီဇင်ဘာညကို အံတုလို့နေသည် ငါမလိုချင်သော ဒဏ်ရာလေး နာကျင်နေပြီပဲ မျှော်လင့်ခြင်းတွေ ငါမုန်းလိုက်ချင်ပြီ ဒီလိုညတွေ ကုန်ဆုံးလိုက်ချင်သည် မြူမှုန်တွေရဲ့ ခြေသံလေး နင်ပြန်မလာတော့ဘူးလား CHO : CHO : CHO : အချစ်ပျောက်လိုက်ရှာလဲပဲ အိုး … ဟို … ဟို …
Artist - IMP
ပါးပြင်မှာ သနပ်ခါးလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာကွာ သူများတွေထက် အထင်ရှားလေးပဲရယ် ကိုယ့်အတွက်လမင်းလေးပါ အမြဲတမ်းပြုံးနေလိုက်ပါ ရိုးရိုးလေးနဲ့မျက်နှာ ကမ္ဘာကျော်တောင်မမီနိုင်ဘူးကွာ … ကိုယ့်ရဲ့ နှလုံးအိမ်ထဲမှာ ချစ်စိတ်တို့နိုးထလာ ဒီတစ်သက်စာ ချစ်…မေတ္တာ… မိုးပေါ်က နတ်သမီးလေးလား အသက်ရှူမှားလောက်တယ်ကွာ ရင်အေးစေတဲ့ ဒီအပြုံးလေးနဲ့ရယ်… ရိပ်ဖွဲ့ပါအိပ်မက်မှာ (အမြဲတမ်းပြုံးနေလိုက်ပါ ရိုးရိုးလေးနဲ့မျက်နှာ ကမ္ဘာကျော်တောင်မမီနိုင်ဘူးကွာ… ကိုယ့်ရဲ့ နှလုံးအိမ်ထဲမှာ ချစ်စိတ်တို့နိုးထလာ ဒီတစ်သက်စာ ချစ်… မေတ္တာ)၂ ပါးပြင်မှာ သနပ်ခါးလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာကွာ ရင်အေးစေတဲ့ ဒီအပြုံးလေးနဲ့ရယ် ကျေးဇူးပါ မိန်းကလေးရာ…
Artist - အဲလက်စ်
ဘယ်လောက်အိပ်အိပ်တော့မ၀တာ ငါဟာရူးကျူးနာ ဘယ်လောက်စားစားလည်းငါ့မှာ ပုံစံမပြောင်းပါ ကြင်နာသူရေ့ ကိုကမလှတော့လည်း ရှည်ရုံပဲ ကိုယ်နည်းနည်းတော့ဝချင်တယ် ဘယ်အားဆေးဘယ်လောက်သောက်သောက်ပါ လူဟာဒီတိုင်းပဲ တစ်လတစ်ခါ ၀ိတ်တက်ပေးပါ ပေါင်ချိန်စက်ကြီးရယ် ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ ငါအရမ်းဝချင်တာ ခန္ဒာကိုယ်က သူအားကိုးဖို့ဖြစ်ပါ့မလား (သူများတွေလို ၀လာမှ သူနဲ့ကိုယ်ဟာ အတွဲမျှမှာ)၂ ဘယ်လောက်အိပ်အိပ်တော့မ၀တာ ငါဟာရူးကျူးနာ ဘယ်လောက်စားစားလည်းငါ့မှာ ပုံစံမပြောင်းပါ ကြင်နာသူရေ့ ကိုကမလှတော့လည်း ရှည်ရုံပဲ ကိုယ်နည်းနည်းလောက်ဝချင်တယ် ဘယ်အားဆေးဘယ်လောက်သောက်သောက်ပါ လူဟာဒီတိုင်းပဲ တစ်လတစ်ခါ ၀ိတ်တက်ပေးပါ ပေါင်ချိန်စက်ကြီးရယ် ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ ငါအရမ်းဝချင်တာ ခန္ဒာကိုယ်က သူအားကိုးဖို့ဖြစ်ပါ့မလား (သူများတွေလို ၀လာမှ သူနဲ့ကိုယ်ဟာ အတွဲမျှမှာ)၂
အချစ်မရှိမှဘဲ… ငါ Artist : ရဲလေး
Rap 1 : ကံကြမ္မာက သူသတ်မှတ်ခဲ့လို့စီစဉ်တာများ…ဒီဒဏ်ရာကမင်းလုပ်ခဲ့လို့ မပီပြင်ပါကွာ… ငါ့ချစ်သူမင်းပခုံးမှာပေးဆပ်ရင်းပဲ မှီချင်လာတာ… အရှုံးတွေနဲ့ပဲသည်းခံပြီး ငါပြုံးနေခဲ့တယ်…. ဘယ်သူမှမသိတဲ့အချိန်တွေမှာ တွေ့ပြီးပြန်ကြမြဲ မင်းသိပ်ဖြစ်ချင်နေတာက…. အပေါင်းအသင်းကြားမှာစံပြအတွဲ… ပြန်မရခဲ့ စတွေ့ချိန်ကကြားခဲ့တဲ့စကားသံကို… အခုတော့တခြားစီပဲ… ငါ့ဘက်ကြည့်မှားပြန်လို့… ချိန်ထားတဲ့ပြက္ခဒိန်ကနေ့ရက်တွေသာပြောင်းလာမယ်… တယ်လီဖုန်းပြောရင် လေသံတွေကမာပြီး fault လာတယ်… ဘယ်ဆီမှာလဲ… အရင်ကနေ့ရက်များစွာက… တစ်ခါတစ်လေမှာစိတ်ကုန်တာ… တဒင်္ဂသွေးပျက်သွားတာပါ… ယောက်ယက်ခတ်ပြီးချစ်ခဲ့တာ… တကယ်အတွင်းထိရူး… ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ငါ… မျက်ရည်လွယ်တာ မင်းမသိဘူး… ၀မ်းမနည်းခဲ့ တစ်ချိန်မှာမင်းကသိမှာပါ… ငါရေးထားသမျှ လမ်းခွဲမယ့်အကြောင်း… သီချင်းမရှိဘူး… CHO : မင်းကမုန်းရက်နိုင်ပြီလား… မင်းကပြောရက်နိုင်ပြီလား… အဝေးမသွားပါနဲ့… အချစ်မရှိမှာဘဲ ငါ သိပ်ကြောက်နေမိတာ… မင်းကလမ်းခွဲနိုင်ပြီလား… မင်းကမေ့လိုက်ချင်ပြီလား.. အဝေးမသွားပါနဲ့… မင်းရှိနေပါ… မင်းရှိနေပါကွာ… Rap2: မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာတွေးကြည့်ရင်.. ငါယောက်ျားလေးပဲ… မဖောက်ပြားသေးဘဲ… ချစ်ခဲ့တာတွေကိုလည်းလျှောက်ကြွားသေးတယ်…စွပ်စွဲတယ်… အဆင့်မရှိတဲ့စွဲချက်တွေနဲ့…မကျွတ်ကျဲပဲ.. ငါ့စိတ်ငါလုံတယ်.. မင်းရဲ့စိတ်မှာမရွံ့မရဲ… အနေဝေးလည်း…တစ်ဘ၀လုံးအတူနေမယ်လို့… အဖြေပေးခဲ့… လိုအပ်ချိန်တိုင်းလည်း မင်းရဲ့ဘေးမှာနေပေးဆဲ… ကမ္ဘာကြီးကကျယ်တယ်… ဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းဆိုတာ သိပ်ကိုကျဉ်း… မင်းကြားတဲ့သတင်းတွေလည်း… ငါမခံနိုင်တော့ငါစိတ်တိုရင်း… စကားတွေကများ… သွားနေကြလမ်းတွေဟာ အရင်လိုပုံစံတိုင်း… မလွတ်လပ်တော့ပါ… မတော်တဲ့ဖိနပ်ကိုဒုက္ခခံပြီးစီးလည်းကျွတ်ထွက်တော့မှာ… မင်းဘက်က ဘယ်လိုသိဦးမလဲ… တွေးကြည့်ရင်ငိုမိတုန်းပဲ… အသည်းကွဲသီချင်းတွေကိုလည်းဆိုကြည့်ဦးမယ်… စဉ်းစားတယ် ဒီဘောင်ကိုကျော်မလာနဲ့… သူ့ရဲ့ဘက်ကမျဉ်းတားတယ်… အရာရာကိုစိန်ခေါ်ပြီးငါ့ဘ၀နဲ့အခု… ရင်းထားတယ်… ဘော်ဒါတွေပြောနေကြတဲ့… အတွင်းစကားရယ်ပေါင်းပြီးတော့… ထွက်လာရင်မခံနိုင်ပါဘူး… သတင်းများတကယ်… CHO : Rap3: မလွမ်းဘူးလို့အားတင်းလည်း… ငါ့ကိုယ်ငါပဲညာနေတာ… အပြင်ကသည်းတဲ့… မိုးမှာသတိရခြင်းတွေပါနေမှာပဲ…ရွာနေတဲ့ငါ့ရင်ထဲမှာမစဲတော့ဘူး… အခုဒါတွေဟာ… တရားခံဟာ ဘယ်မှာလဲ... ပိုက်စိတ်ကြိုက်ပြီးရှာနေတာ… ညဘက်ရောက်ရင် ဖုန်းဆက်တဲ့သူအကြောင်းကို… ဖြေရှင်းပါ… သူကဘယ်သူလဲ… ငါ့အဆင့်ကခြေရင်းမှာ… ယောက်ျားလေးမာန ထိန်းချုပ်ထားပြီးနေရင်းသာ… ရက်တွေကပြဿဒါးတွေနဲ့… ဆက်နေရတာမောနေပြီ… အနားမှာမရှိတုန်းက… ငါ့ရင်ကိုနွေးစေတယ်… စွန့်ကြဲတဲ့အပြုံးတစ်ချက်က ငါ့အမြင်ကိုအေးစေတယ်… ဘယ်သူ့ကိုရွေးချယ်မှာလဲ အခုငါလေမေးနေတယ်… တွေးနေဆဲအဆင်ပြေမှာလား မင်းဘာတွေရွေးနေလဲ… မင်းသမီးရှုံးမယ့် မာယာသုံးတဲ့ယုံကြည်မှုတွေ… ငါဘယ်လိုနားလည်ရမလဲမင်းပြောတဲ့… ပုံပြင်တုတွေ… မမေ့ရက်ခဲ့… သွေးပျက်ခဲ့… တစ်ခါတရံမှာမင်းကို… အဆွေးဓါတ်နဲ့… ငါရေးတတ်ခဲ့တဲ့သီချင်းလို… CHO : CHO :
ကြင်ရာဖက် Artist : ဟဲလေး
ကျွန်တော်ရှာချစ်ခဲ့တဲ့မိန်းမတွေထဲ ဒီကောင်မလေးကတော့အောက်သက်ကြေတယ် ကဗျာဆန်အောင်သူ့ရုပ်ကမလှပပေမယ့် အိုဇာတာကောင်းဖို့အတွက်ရွေးလိုက်တော့မယ် သူ့ရုပ်ကလေးဟာတော့တော်တော်တော့မလှပေမယ့် အဆင်ပြေလို့ချစ်သူနဲ့တွဲမှာပဲ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လိုမျိုးအတင်းတွေဆွဲ အဆင်ပြေလို့ချစ်သူနဲ့တွဲမှာပဲ သူ့ဘ၀လေးဟာတော့ ပညာတတ်မဟုတ်ပေမယ့် ကြင်ရာဖက်ရွေးချယ်ဖို့သင့်တော်တယ် ကျွန်တော်ရှာချစ်ခဲ့တဲ့မိန်းမတွေထဲ ဒီကောင်မလေးကတော့အောက်သက်ကြေတယ် ကဗျာဆန်အောင်သူ့ရုပ်ကမလှပပေမယ့် အိုဇာတာကောင်းဖို့အတွက်ရွေးလိုက်တော့/ပါ့မယ် သူ့ရုပ်ကလေးဟာတော့တော်တော်တော့မလှပေမယ့် အဆင်ပြေလို့ချစ်သူနဲ့တွဲမှာပဲ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လိုမျိုးအတင်းတွေဆွဲ အဆင်ပြေလို့ချစ်သူနဲ့တွဲမှာပဲ သူ့ဘ၀လေးဟာတော့ ပညာတတ်မဟုတ်ပေမယ့် ကြင်ရာဖက်ရွေးချယ်ဖို့သင့်တော်တယ် ကျွန်တော်ရှာချစ်ခဲ့တဲ့မိန်းမတွေထဲ ဒီကောင်မလေးကတော့အောက်သက်ကြေတယ် ကဗျာဆန်အောင်သူ့ရုပ်ကမလှပပေမယ့် အိုဇာတာကောင်းဖို့အတွက်ရွေးလိုက်တော့မယ် ကျွန်တော်ရှာချစ်ခဲ့တဲ့မိန်းမတွေထဲ ဒီကောင်မလေးကတော့အောက်သက်ကြေတယ် ကဗျာဆန်အောင်သူ့ရုပ်ကမလှပပေမယ့် အိုဇာတာကောင်းဖို့အတွက်ရွေးလိုက်ပါ့မယ် လာ လာ လာ လာ လာ လာ လာ လာ လာ လာ လာ လာ လာ လာ လာ လာ လာ လာ လာ လာ လာ လာ လာ လာ
နေချင်တာမင်းအနား Artist : IMP
နင်ဟာ ငါ့ကောင်းကင်တစ်ခုပါ ငါပိုင်သမျှ နင့်တစ်ယောက်တည်းပါ ငါအချိန်တိုင်း နင့်ရဲ့အနားမှာ နင်လိုသမျှ ဖြည့်ဆည်းချင်လို့ပါ ဘာကိုမှ ငါမမျှော်လင့်ပါ နင့်အတွက်ပဲ နင်ကြေကွဲ အားငယ်တဲ့အခါ ငါနင့်အနား နှစ်သိမ့်မြဲပါ ငါတစ်ယောက်တည်း မဖြစ်နိုင်လို့ပါ နင်ဘယ်သွားသွား ငါ့ကိုခေါ်ပါ ငါ့ဆန္ဒတွေရယ် အလှမ်းကွာ တကယ်ကိုငါ မင်းအနားမှာ နေချင်ပေမယ့်လည်းကွာ/ပဲ CHO : အတူတူနေဖို့ ဘယ်လောက်အထိ ဝေးရမလဲ အတူတူပျော်ဖို့ ဘယ်လောက်ကြေကွဲရမလဲ ငါဒီလိုမျှော်လင့်ရင်း မောပြီ/ဝေးပြီ အချိန်တွေသာ ဒီလိုနဲ့ လည်ပတ်ခဲ့)၂ ပါပြီ
နောက်ဆုံး Artist : အယ်ဖြူ
လမ်းခွဲတစ်ခုမှာ ငြိမ်သက်ဆဲ ကိုယ်စီ ဒဏ်ရာများနဲ့ ပြည့်နက်ဆဲပဲကွယ် ပတ်သက်ခဲ့တာ ဒါနောက်ဆုံးပဲ နာကျင်စေတဲ့စကားတော့ မပြောပါနဲ့ ရင်ထဲက ချည်နှောင်ထားတဲ့ ဒီကြိုးလေးတွေလည်း ပြတ်တောက်သွားရင် နောက်ဆုံးတော့/တို့နှစ်ဦးပဲ နာကျင်မှာ တို့နှစ်ဦးပဲ/နာကျင်မှာကို မင်းလေးနားလည် သိပ်ချစ်ခဲ့တာ သိသားပဲ ပြန်လည်ကာလေ စဉ်းစားကြည့်ပါဦး ကလေးရယ် ဒါနောက်ဆုံး တောင်းဆိုနေခြင်းပဲ နာကျင်စေတဲ့ စကားတော့ မပြောပါနဲ့ဦး နေဦး ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ အမှောင်ညတွေ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ အမှောင်ညတွေ ပျောက်ဆုံးချိန် လမ်းခွဲတစ်ခုမှာ ငြိမ်သက်ဆဲ ကိုယ်စီ ဒဏ်ရာများနဲ့ ပြည့်နှက်ဆဲပဲကွယ်
တကယ်ဆိုရင် Artist : ချစ်သုဝေ
လွယ်လွယ်လေးနဲ့ မင်းချန်ထားခဲ့ပေမယ့် နေရာတိုင်းမှာ မင်းအရိပ်တွေထင်တုန်းပဲ ခင်သူတိုင်းလည်း ခုထိပြောချင်နေကြတုန်းပဲ နင်ရှိတုန်းကလို ပုံစံမျိုးနဲ့ အိပ်မက်ဟောင်းပဲ အကျင့်ပါပြီး မက်နေတယ် မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ သီချင်းဟောင်းတွေ ဆိုဖြစ်မယ် လူတွေပြောတဲ့ မင်းအတင်း မကြားချင်ယောင်ဆောင်ထားလည်း နင့်အကြောင်းပြောရင် နားစွင့်တုန်းပဲ CHO 1: တကယ်ဆိုရင် လိုအပ်ချက် ကွက်လပ်တွေ သိပ်များလွန်းနေလို့ မင်းကို စောင့်နေခွင့်ပေးပါ နေညိုရင် ငိုတတ်တဲ့စိတ်နဲ့ ရင်မှာ အသားမကျနိုင်လို့ အနားကို မင်းပြန်လာပေးပါ အတူတူရေးတဲ့ သီချင်းတွေတော့ ရှိပါရဲ့ အတူဆိုပေးမယ့် ဘေးအနားမှာ နင်မရှိခဲ့ ဘာရယ်မဟုတ်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ အဟောင်းတွေ ပြန်အသစ်ရေးဖွဲ့ နင်ရှိတုန်းကလို ပုံစံမျိုးနဲ့ လွန်လေပြီးတဲ့ အမှားတွေအတွက် တောင်းပန်တယ် အရင်ပုံစံမျိုးနဲ့ ခဏတွေ့ချင်ပါသေးရဲ့ ရင်မခုန်တော့တဲ့ မင်းရဲ့ သူစိမ်းတွေလို အကြည့်မျိုးနဲ့ ခဏလေးတွေ့တောင် ကိုယ်ကျေနပ်မယ် CHO2: တကယ်ဆိုရင် လိုအပ်ချက် ကွက်လပ်တွေ သိပ်များလွန်းနေလို့ မင်းကို စောင့်နေခွင့်ပေးပါ ဒီကမ္ဘာမှာ နင်မရှိတဲ့ နွေရက်တွေကို ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့ အနားကို မင်းပြန်လာပေးပါ CHO2:
အချစ်တို့ပြန်ပေးပါ Artist : ဧကရီ
မင်းလေးမေ့နေတဲ့အချိန် ငါ့မှာတစ်ယောက်တည်း လွမ်းဆွတ်လို့ကြေကွဲ မင်းနဲ့ဝေးချိန်လေးတွေ မနေတတ်ဘူး သိပ်ချစ်လွန်းလို့ပါ ပြန်ခဲ့ပါ အချစ်ရယ်.. ပြန်ခဲ့ပါ အချစ်ရယ်…
မင်းထားရက်ခဲ့ဖူးတယ် ငါ့ကိုဘာကြောင့် အကြောင်းပြချက်တွေမပေး မုန်းမေ့နိုင်ဖို့တော့ မလွယ်ပါဘူး သိပ်ချစ်လွန်းလို့ပါ ရင်ထဲသိပ်လွမ်းတယ် ရင်ထဲသိပ်လွမ်းတယ် ပြန်ခဲ့ကွယ်…
CHO : ကြိုလင့်နေခဲ့ ငါ့ရင်ခွင် မင်းလေးလှမ်းခဲ့ပါ ခွင့်လွှတ်နေရင်းငါ့အချစ်တွေ မင်းအတွက်သက်သက်ပါ ပျော်နေကြတဲ့ ချစ်သူတွေ မင်းလေးတွေ့တဲ့အခါ သတိရမှာလားမေးတဲ့အခါ ရင်ထဲကစကားဖြေပါ…
ကြင်နာသူတွေ ပျော်နေချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့အသည်းဟာကွဲအက် မကြင်နာသူ သူဘယ်ဆီမှာ မေ့ပျောက်ထားနိုင်စွမ်းရဲ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ သူပြန်လာမယ် မသိစိတ်ထဲက မျှော်လင့်ဆဲ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း မင်းပေးတဲ့ပို့စကဒ်လေးတွေ မင်းပေးတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ သတိရတိုင်းထုတ်ကြည့်မိတာ တဆစ်ဆစ်နဲ့လွမ်းဆိပ်တက်လာ ရောက်တဲ့အရပ်မင်းပြန်ခဲ့ပါ ဟိုအရင်လို မင်းရဲ့အချစ်တို့ ပြန်ပေးပါ အိုး…
ငါညာခဲ့တယ်ပေါ့ ဒါပေမဲ့ Artist : ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်
မာယာတွေမစာမနာငါသုံးကာ အလိမ်အညာတွေ အရှိန်အ၀ါတွေဖုံးကာ မင်းမခံနိုင်အောင် ငါဟန်ဆောင်ပြုံးကာ အရုပ်လိုနင့်အား ကစားပြီးလိမ်နေတာ ငါညာနေတာ ဒါတွေကိုနင်မသိပါ ငါ့အပြင်မတူတဲ့ ငါ့အရင်လူလည်းမရှိခဲ့ပါ မတော်တဆများ နင့်အပေါ်ညာတာသိခဲ့မလား ငါ့ကိုနင်က မုန်းပြီးရွံနေမလား တစ်ချိန်ချိန်မှာ ရှင်းပြခွင့်ရနိုင်မလား အကြိမ်ကြိမ်ငါ မင်းအား ရှင်းပြဖြစ်အောင်ကြိုးစား ငါညာခဲ့တယ်ပေါ့ ဒါပေမဲ့ နင်ပြန်လည် ခွင့်မလွှတ်လည်းနေပါ ထင်ကျန်တယ် အတိတ်ကရိပ်ဟာငါ့ကိုနှိုးဆွ ငါညာခဲ့တယ်ပေါ့ ဒါပေမဲ့ ဖြူစင်စွာ အတူရင်မှာရှိသလို ကန်ရေပြင်မှာ နေ၀င်တာကြည့်ခဲ့သလို အရင်တစ်ခါက နင့်ရင်မှာငါအိပ်ခဲ့သလို အတိတ်ကို ပြန်ပြီးလွမ်းမိနေပြီကို သာယာတယ် နင့်မာယာမဲ့အနမ်းကို တစ်ခါတစ်ခါလည်း ငါလေပြန်လွမ်းမိသလို ညှာတာတယ် စာနာတယ်အကြည့်တို့ကို အရှိကို အရှိတိုင်းသိဖို့ အချိန်မီဆို (အတိတ်ကို ပြန်တမ်းတမိနေပြီကို)
100% Artist : J-me
Hook (100% What 100% What all my real Me's ya keep it 100% What I keep it tight on the mic 100%)2 V1 : I keep it simple, I keep it fresh, this aim's no game or compilation It'satest like examination for me's that fight for the crown. Who like to spit on the mic before they writing it down. I keep it 100% J-me has Done it again my hardcore sounds Rock tours cause I got more than 110 people on my back And I' me give youasmack for messing around With Rap, matter of feet I probably kill you on stage with words that's Hurt and if it's not enough than I'maslam you in dart Punk. (100% What 100% What all my real Me's ya keep it 100% What I keep it tight on the mic 100%)2 Pay respect to du real MC I'm kept it Hip Hop, so I'm keeping it me and. V2 : So many Emcee's want to mess with us, they will be like Ashes and Dust in the garbage truck. CAUSE I bust like the police spit at you in Your street click Clack you with your heat, backslap you cause you phony. My lyrical battle hit your stereo faster than Burgers I'm keeping it tight Splitting rhymes you never heard of I'm not I call shots I on top of Hip : Hop with Rappers gathered like crops and I'm gone get props Forget Popularity I hold the little to pick up the mic in front of ya'll and Battle all My rivals It's the M.H.A
ကိုယ်မမှားပါဘူး Artist : ရဲလေး
မင်းအနားနားနေပေးပါ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့နေ့များမှာ မင်းတစ်ယောက်ပဲလိုတယ် ကိုယ်မမှားပါဘူး ဘယ်လိုမှလည်းမမှားနိုင် မင်းအနားနားနေပေးပါ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့နေ့များမှာ မင်းတစ်ယောက်ပဲလိုတယ် ကိုယ်မမှားပါဘူး ငါသတိရနေပါတယ် အချစ်ရာ... ဘ၀မှာအထူးအဆန်းပဲ ဘယ်လိုမှလည်း မေ့ပစ်လို့ကိုမရနိုင်တော့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ အရူးတစ်ပိုင်းနဲ့ မထင်မှတ်တဲ့အချစ်တစ်ခုမှာ စူးစမ်းတဲ့အရာရာတိုင်း ငါမင်းကို ထပ်ကာထပ်ကာမေးနေခဲ့ပြီး စိတ်ထဲမှာတကယ်ပဲငါ့ကို ချစ်ရဲ့လားပြော မအေးဆေးတဲ့မင်းရဲ့ အတိတ်က အကြောင်းအရာတွေလည်း ရှင်းထားလိုက်တော့ အခုဘ၀ရဲ့ လက်ရှိအချိန်တွေ တန်ဖိုးထားပါ အချစ်အတွက်နဲ့စိမ်းလန်းခဲ့ပြီး သစ်ပင်တွေလည်း ငါကိုယ်တိုင်ပဲ ပြန်ပျိုးထားတာ မရက်စက်နဲ့တော့ မင်းအကြောင်းတွေမကြားချင်ပါဘူး နှာခေါင်းသွေးထွက်ကာ အပျက်ပျက်နဲ့ပေါ့ မင်းလက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားပြီး အနာဂတ်လမ်းကို လျှောက်လှမ်းချင်တာ အခက်အခဲတွေကျော်ဖြတ်ချိန်တိုင်း မကြောက်တမ်းရင်မှာ မင်းရှိနေရင် ငါ့ဘ၀ကြီးပြည့်စုံပါပြီ ငါတကယ်ကိုပျော်နေပါပြီ မင်းငါ့ဂီတကို လက်ခံနိုင်ရဲလို့လား Hip Hop ကိုနားမလည်တဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ငါမနှိုင်းပါဘူး သူများကိုပုတ်ခတ်ပြီးတော့ အပြစ်တွေပြောမယ့်လူတွေလိုလည်း ငါမရိုင်းပါဘူး မင်းသေချာစောင့်ကြည့်နေပါ မင်းနဲ့ငါအကြောင်းသိတွေပါ မင်းပုံရိပ်တွေ ငါ့ရင်ထဲမှာရောက်ရှိနေတာ CHO : ဟိုတုန်းကမပြောခဲ့ရင် ငါ့အတွက်ဆို သိပ်ကောင်းမှာပဲ အတိတ်ဟောင်းက ချစ်သူတွေထက် မင်းကငါ့အပေါ်ပို ကောင်းပါတယ် တိုတောင်းတဲ့အချိန်တွေကလည်း နေ့နဲ့ညရယ် ပြောင်းလဲလာမယ် ကြိုးစားပြီးပြင်ဆင်ပါ့မယ် မကောင်းတဲ့အကျင့် မြောင်းထဲမှာပဲမေး ဘာကြောင့်မို့ငါ့လိုလူမျိုးကိုမှ မင်းချစ်ခဲ့တာတွေး ဘာဖြစ်လို့မင်းနဲ့ကျမှ ပြန်ရင်ခုန်ခဲ့တာလဲဟေး မင်းမသိခဲ့ပါဘူး အရာအားလုံးဟာ ပထမဆုံး ဘယ်နေရာ ဘယ်ကိုသွား မလုပ်ခဲ့တာတွေ ပထမဆုံး ဧပြီ Fool မွေးခဲ့သူ ကျေးဇူးပြုပြီးအရူးမလုပ်နဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေ အခုမရှုပ်နဲ့ သူတို့တွေကဆူးခလုတ်ပဲ ငါမေးတာဖြေပါ ဇာတ်လမ်းကမရေရာ အခုအချိန်မှာဆုံးဖြတ်ပေးပါ မင်းအနားမှာနေပါ ငါအချိန်မှန်မှန်ကို ဖုံးဆက်ပါ့မယ် အိမ်မှာနေနေပေးပါ ဒီတစ်ယောက်တည်းကို ချစ်သွားချင်လို့ ကိုယ်ဟာ ရေရှည်တွေးမှာ ငါမလိမ်ခဲ့ပါဘူး ဒီတစ်ကြိမ်ပဲငါရူးခဲ့တာ အသေချာဆုံးပါ ငါမေးတာဖြေပါဦးကွာ CHO : ငါဘယ်သူ့မှမချစ်ပါဘူး မယုံရင် မင်းဆုံးဖြတ်နိုင်တယ် ငါဟာမင်းအနား ဘယ်နားနားမှာပေါ့ ငါဘယ်သူမှမချစ်ခဲ့ပါ မယုံရင်မင်းပဲဆုံးဖြတ်ပါ ငါမင်းအနား ကိုယ်မဝေးချင်လို့ပါ CHO : မင်းကိုလွမ်းတဲ့အကြောင်း သီချင်းလေးတွေ ငါရေး မင်းကိုချစ်တဲ့အကြောင်း သီချင်းလေးတွေငါပေး ဟို ဟူး ဟို ဟူး ငါမမှားနိုင်ပါ(ငါမမှားတော့ဘူး)… CHO : CHO : CHO :
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://www.chitsanm-luxurymusic.co.cc/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.